राउटे महिला « Khasokhas Follow @khasokhasmag
गोर्पी शाही ७५ वर्षीया राउटे एकल महिला हुन् । आठ छोरी र दुई छोराकी आमा गोर्पीको जति दुःख सायदै अरू राउटेले भोग्नुपरेको छ । १० सन्तान जन्माइन साथमा एउटै रहेनन् । पति शेरबहादुर शाहीको दुई वर्षअघि सुर्खेतमा मृत्यु भयो । पतिको निधनपछि उनी झन् बेसहारा बनिन् । उनी भन्छिन्, ‘दुःख कति छन् कति भनिसाध्य छैन् ।’
सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन वर्षेनी करोडौँ बजेट खर्च गर्दै आएको छ । सुरक्षित सुत्केरीका लागि महिलालाई प्रोत्साहन हुने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर, आधुनिक समाजदेखि धेरै टाढा रहेका कारण राउटे समुदायका महिलाका लागि सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन । राउटे महिला राज्यका यी सुविधाबाट टाढा छन् ।
गर्भवती हुँदा न पोषिलो खानेकुरा खान पाउँछन् न आइरन चक्की । सुत्केरी हुँदा स्याहारसुसार पनि पाउँदैनन् । भात, मसलाबिनाको तरकारी, कन्दमूलका भरमा छाक टार्छन् । कहिलेकाहीँ कतिसम्म सास्ती भोग्नुपर्छ भने शिशु जन्मिएकै दिन बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सुत्केरी हुन नसकेर कतिपयले अकालमा ज्यान गुमाएको उदाहरण पनि छन् ।
राउटे उत्थान प्रतिष्ठान, नेपालकी अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारी ‘जङ्गलका राजा’ दाबी गर्ने राउटे अगुवाले आफ्ना महिलालाई छाप्रोभित्रै गुमराहमा राख्नु लाजमर्दो भएको बताउँछिन् । ‘जङ्गलमै बस्ने भए पनि राउटे समुदायलाई सचेत बनाउन आवश्यक छ । यस्तै अवस्था रहिरहे केही वर्षमै सिङ्गो राउटे जाति लोप हुने खतरा छ,’ सत्यदेवी भन्छिन्, ‘सुरक्षित मातृत्वको अभियान कसरी राउटे समुदायसम्म पुर्याउने सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ ।’
सरकारले समग्र आदिवासी जनजाति समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्देश्यले ०५८ मा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान गठन गर्योङ । तर, यो प्रतिष्ठानले लापोन्मुख राउटेका लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेको छैन । राउटे जातिलाई लोप हुनबाट जोगाउन सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने गैरसरकारी संस्था राउटे उत्थान प्रतिष्ठान नेपालको सुझाव छ ।
‘सरकारले गर्भवती र सुत्केरी अवस्थाका राउटे महिलालाई विशेष सेवा–सुविधा प्रदान गर्नु राम्रो हुन्छ,’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. निर्मल रसाइली भन्छन, ‘जङ्गलमै परम्परागत रूपले बसोबास गरे पनि उनीहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ग्रहण गर्न सक्ने बनाउनुुपर्छ । तब मात्र संरक्षण सम्भव हुन्छ ।’ डा. रसाइली भन्छन्, ‘हामीले स्वास्थ्य सेवा दिन खोजे पनि उनीहरू अनुशरण गर्दैनन् ।’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले कम्तीमा अब एउटा बेग्लै ‘हेल्थ फोर्स’ परिचालन गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।’ ( सन्चारिका फिचर सेवाबाट प्रकाश, दैलेखका पत्रकार हुन् ।)